Zimbabwe Haisati Yaphiwa Mvumo Yekutengesa Mangoda Ayo
Chivabvu 24, 2010
Zimbabwe haisati yava kubvumidzwa kutengesa mangoda ayo ekwaMarange, kudzamara zvinodiwa kuitwa, zvaitwa. Mashoko aya anonzi audzwa hurumende nenhumwa yeKimberly Process, Va Abbey Chikane, avo vasvika muZimbabwe neMuvhuro.
VaChikane vachaita misangano nevamiriri vehurumende, Zimbabwe Mining Development Corporation, Zimbabwe Minerals Marketing Authority, masangano akazvimirira ega nevamwe vane chekuita nenyaya yemangoda. VaChikane vaita musangano nemakurukota ehurumende vakaratidza kutsutsumwa kwavo nekusapihwa zvose zvavaitsvaga pavakaenda kuZimbabwe mwedzi yapfuura.
VaChikane vanonzi vaudza makurukota kuti havasati vasvika panguva yekupa Zimbabwe mvumo yekutengesa mangoda ayo. Nyaya yeZimbabwe iri kutarisirwa kutaurwa mwedzi unouya ku Israel apo Kimberly Process ichange ichiita musangano wayo.
Masangano akazvimirira ega ari kutiwo dai Zimbabwe yamboburitswa musangano reKimberly Process kusvika yagadzirisa nyaya yekwaMarange.
Va Murisi Zwizwai ndivo mutevedzeri wegurukota remigodhi. VaZwizwai vanoti Zimbabwe ichiri kure kuti mangoda ayo apihwe mvumo yekuti atengeswe, sekutaura kwaVa Chikane.